Xeer sidee ah baa looga hor tegi karaa dhallaanka qudha iska jara - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeer sidee ah baa looga hor tegi karaa dhallaanka qudha iska jara
La daabacay måndag 8 april 2013 kl 15.00
Waxaa kor u kici lahaa macluumaadka loo lee-yahey falalkaa
Sawirle: Claudio Bresciani/Scanpix
Tira-koobkii ugu dambeeyey ee laga sameeyey ayaa xaqiijinaya iney sannadkii qudha iska jaraan dhallaan tiradoodu gaarsiisan yihiin 124 oo da'dooduna u dhexeeyso 15 illaa iyo 24 jir.
Waa tiro sannad walba sannadka ka dambeeya kor u sii kaceeysa. Dhallaanka da'doodu ka yar tahey 15 sannadood ee qudha iska jara ayey tiradoodu gaarsiisan tahay shan ruux sannadkiiba.
Hallka ey dhanka kale hoos u sii dhaceyaan dadka waaweyn ee falalkaa ku tallaabsada.
Wakiilka xuquuqda dhallaanka (Barnombudsmannen) Fredrik Malmberg, ayaa sheegay inuu ka welwel-san yahay xaaladdaa. Isla-markaana soo jeediyay in la waajibiyo in fal walba ee noocan ah baaritaan lagu sameey, sidii wax looga ogaan lahaa tallaabooyinka hayadaha kala duwan ee ammuurahaani quseeyaan wax uga qabteen intii aanu falku dhicin:
- Waxaa suurtagal noqon lahayd in laga helo baaritaannadaa macluumaad la xiriira waxyaabaha noo muuqan waayey. Waxaa dhacdey mararka qaarkood in falalkaa la sheegey iney jireen saansaamo dhallaanku la socdey, hase yeeshee ka dahsoonaa dadka waaweyn, ama ay dhici karto in saraakiil hayad ka howl-galaa u muuqdeen saansaamo. Hase yeeshee waxaa baaritaannada noocan oo kale ah lagu ogaan karaa baahida iyo culuunta loo baahan yahay sidii mustaqbalka looga hor-tegi lahaa falalka ah iney dhallaanku qudha iska jaraan.
Dhanka kale ayay baahiyi ka jirtaa sidii xeer looga soo saari lahaa middaasina oo sahleeysa in laga gudbi karo xeeyn-daabyada heyadaha u dhexeeya ee sirta ah. Maanta ayuu ka yaalaa xeer oo keliya kolka ey dhallaan la soo gudboonaato geeri ey ugu wacan tahay fal-dambiyeed loo geeystey.
Wasiiradda dhallaanka iyo waayeelka Maria Larsson ayaa sheegtay inay doonayso u kuur-galka fikirka wakiilka xuquuqda dhallaanka (BO), iyadoona intaa raacisay iney maanta daldaloollo ka jiraan hoowlaha hayadaha:
- Waxaa ka jira baahi loo qabo macluumaad la xiriira amuurtaa iyo habkii looga hor-tegi lahaa in dhallaanku qudha iska jaraan. Waxey hayaduhu qaban karaan hoowlo intaa ka badan. Waana inaan hubinnaa in hayaduhu tallaabooyin ka qaadi karaan macluumaadka soo gaara, sida ay sheegtay.